AHOANA NO FOMBA HANORATANA TSIPIKA AO AMIN'NY PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Mamisaha andalana ao amin'ny Photoshop
Amin'izao fotoana izao, eny an-dalam-be any an-tanànanao dia afaka mahita vazaha marobe an'ny fiara VAZ ianao. Ity dia marika fiara malaza, izay malaza amin'ny fahatsorany sy ny sarany ambany. Na izany aza, misy ny fiara sy ny tsy fitoviana toy izany - fahamendrehana izany. Izany no antony tokony hanaovana fitiliana tsy tapaka ary manao izany amin'ny programa tsara sy avo lenta. Ohatra, ao amin'ny My Tester VAZ.
Ny fandaharan'asa rehetra hahitana ny fiara dia mifamatotra amin'ny tapakila sy ny famafana ny angona avy amin'ny birao. Ny filàna toy izany dia nitsangana noho ny zava-misy fa ny fiara rehetra dia tsy afaka manisy endriky ny endriky ny fiteny iray mora takarina amin'ny rehetra, na dia misy famokarana an-trano aza. Ny fandaharan'asa azo raisina amin'ity tranga ity dia tsy mitovy amin'ny analoga. Ny rakitra rehetra dia aseho amin'ny main ny efijery.
Ity efijery ity dia ahafahanao mandefa data izay efa noraisina sy voavonjy nandritra ny fampiasana azy taloha. Tena ilaina izany, ohatra, mba hampitahana ny vokatra, satria azo atao ny mahazo antoka raha nanampy ilay fanamboarana na tsia.
Tokony homarihina avy hatrany fa ny fandaharanasa dia mety indrindra ho an'ny matihanina matihanina, ary avy eo dia azo ampiasaina amin'ny mpampiasa tsotra. Ny zava-misy dia noho izany dia ahafahanao manamboatra koa ny paosina, ahafahanao manala na manilikilika ny fifandraisana lehibe sasany, sy ny sisa. Izany rehetra izany dia hita taratra amin'ny iray amin'ireo fizarana maromaro natolotry ny mpanara-maso.
Ny singa manan-danja dia ny bokotra. "Fifehezana miverina", izay manala amin'ny mpampiasa ny fahafahana manao fiovana amin'ny asan'ny fiara ary manome ity tranga ity amin'ny birao mpanara-maso. Ity dia ampahany manan-danja amin'ny fitsaboana amin'ny fanampian'ny My Tester VAZ, satria rehefa manamboatra fiara dia ilaina ny manaloka ny rafitra rehetra amin'ny milina, fa tsy ny programa amin'ny ordinatera.
Ny ankamaroan'ny olona dia tonga any amin'ny toeram-pitsaboana izay tsy faly amin'ny rafitra elektronika na amin'ny fampisehoana maotera. Ireo no fototr'izy ireo izay mora jerena amin'ny fandaharana, ary na dia ny tenany aza. Raha miresaka manokana momba ny My Tester VAZ isika, dia ahafahan'ny tompon'ny fiara eto an-toerana hiantehatra betsaka momba ny asan'ny motera, izay ahafahana manatsoaka hevitra mikasika ny ilàna fanitsiana na ny mety ho ampiasaina bebe kokoa.
Na izany aza, ny Tazan'ny Vazako VAZ dia tsy mamela na oviana na oviana hanova zavatra. Eny, ary sarotra ny mampiseho ireo fampahalalana toy izany, satria na izy ireo dia ao anatin'ny fari-potoana azo ekena, na mila manamboatra ny fiara. Tsy misy fepetra famahana ny aretina mifandraika amin'ny fanoloana tarehimarika, tsy azo atao izany.
Ny zavatra mahaliana indrindra ho an'ny mpampiasa tsotra dia manomboka eto. Noho ireo fahafaha-manao ireo, ny fitaovana maoderina sy rindrambaiko ho an'ny diagnostika dia matetika azo. Famaritana ny fahadisoana sy ny fitsapana amin'ny fiara amin'ny fiara. Voalohany dia mila mifandray amin'ny fiara ianao. Ny rindrambaiko dia hamaritra amin'ny fomba samihafa ny antontan-kevitra ilaina rehetra ary hanolotra safidy maro samihafa manamarina ny fahadisoana izay tsy maintsy apetraka ao amin'ny serivisy serivisy.
Azonao atao raha tsy aseho ao amin'ny varavarankely manokana ny hadisoana. Matetika dia misy ny isa sy ny famaritana azy. Ny tahirin-kevitra toy izany dia tonga amin'ny solosaina avy amin'ny birao mpanara-maso, noho izany dia tsara ny manamarika fa tsy misy dikany ny fampahalalam-baovao toy izany. Mba hanaovana izany, dia miverina ny fahadisoana, ary ny fitsapana dia mandeha amin'ny fiara mandeha ara-dalàna, isan'andro, na amin'ny fanindriana bokotra manokana. Raha toa ka tsy mampiseho zava-baovao ny My Tester VAZ, dia mihevitra ny fiara ho ampiasaina ny fiara, ary afaka hadino ny rakitsoratra taloha.
Ny fandaharana dia maimaim-poana;
Ny Rosiana ihany no ampiasain'ny interface;
Tsotra tsotra sy ambany-famolavolana;
Fampahalalana lehibe momba ny fototry ny fiara.
Ara-dalàna ny fiara VAZ;
Tsy fampahafantarana ny mpampiasa tsy manana traikefa;
Tsy misy mpanohana azy.
Raha jerena ireo voalaza ireo, dia azontsika atao ny manatsoaka fa ny programa voavolavola dia tonga lafatra ho an'ny matihanina, satria manangona tahiry betsaka be dia be izay ahafahanao manao fanamboarana marina sy mahomby.
Ny mpandahateny GAZ Video Tester Dead Pixel Tester Tyranus Daewoo Scanner
Ny famakafakana ny fiara an-trano dia fomba fiasa izay ilaina matetika kokoa noho ny fiara vahiny. Ny tadidiko VAZ dia afaka manampy anao hanao izany - fandaharam-potoana tena tsara sy fampahafantarana.
System: Windows 7, 8, 10, XP, Vista
Mpandrindra: Aleksander Karkhov
https://termotools.com mg.termotools.com © Photoshop 2019